जाडो मौसममा मुटु रोगीले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ! - स्वास्थ्य - प्रकाशितः मंसिर ७, २०७३ - नारी
जाडो मौसममा मुटु रोगीले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ !
क्यानडाको एउटा चिसो सहरमा गरिएको अध्ययनअनुसार १० प्रतिशत तापमान घट्दा हर्टएट्याकको घटना ७ प्रतिशतले बढेको पाइयो । यसैगरी हालसालै बेलायतमा गरिएको अध्ययनअनुसार तापक्रम १ दशमलव ८ डिग्री फरेनहाइट घट्दा २ सय जनामा हर्टएट्याक भएको पाइयो । ७५ देखि ८४ वर्षका वृद्धवृद्धामा जाडोमा हर्टएट्याक हुने सम्भावना केही बढी हुने कुरा पनि अध्ययनबाट पत्ता लाग्यो ।